Autopilot mandefa ny fahitana, mpanara-dia an'ny mpanjifa ho an'ny mpivarotra | Martech Zone
Autopilot dia mandefa ny fahitana, mpanara-dia an'ny mpanjifa ho an'ny mpivarotra
Alarobia, Jona 7, 2017 Alatsinainy Desambra 7, 2020 Douglas Karr
Ny 82% -n'ny mpanjifa dia nijanona tsy nanao orinasa tamin'ny orinasa iray tamin'ny 2016 taorian'ny fanandramana ratsy araka ny Tatitry ny fironana amin'ny Internet farany an'i Mary Meeker. Ny tsy fahampian'ny data sy ny fahitana dia mety hanakana ny mpivarotra tsy hiroso amin'ny asany: ny angona vaovao dia mampiseho fa ny ampahatelon'ny mpivarotra tsy ampy ny angona ary Analytics mila manombatombana ny zava-bitany izy ireo, ary 82% no nilaza tsara kokoa Analytics dia hanampy azy ireo handroso amin'ny asany.
Autopilot mandefa ny fahitana
Tsy Mifantoka dia nanomboka fijery - mpanara-maso fahasalamana ho an'ny mpivarotra manampy azy ireo hametraka, hanaraka ary hahatratra tanjona. fijery sary an-tsaina ny tanjona manokana sy ny metrika lehibe (fisoratana anarana amin'ny mailaka, fanatrehana hetsika sns.), mba hahitana izay hafatra sy fantsona miasa, ary vao haingana no nampiasain'ny Microsoft Developer Group alohan'ny fanao isan-taona Manaova fihaonambe hijerena sy hahatratra ny tanjon'izy ireo hisoratra anarana.
fijery manome fomba iray hahitan'ny mpivarotra sary an-tsaina sy hanarahana ny zava-bitan'ny dian'ny mpanjifan'izy ireo manoloana tanjona iray, sahala amin'ny fampiharana fanarahan-dia. Ao anatin'ny 60 segondra, ny mpivarotra dia afaka manara-maso ireo fantsom-pandresena, metrika ary hafatra ilaina hanovana vola miditra bebe kokoa ary hanatsara ny traikefa ho an'ny mpanjifa tsaratsara kokoa.
Over 700 Tsy Mifantoka ny mpanjifa dia nandray anjara tamin'ny fitsapana taloha ny Insights, miaraka amin'ny antsasany mahery milaza fa ny Insights dia nanampy azy ireo hampitombo ny zava-bitan'ny dia, ary 71 isan-jato no nilaza fa matoky tena kokoa amin'ny fiantraikan'ny marketing izy ireo.
Miaraka amin'ny Insights, azoko natao ny nandinika ireo minutia isaky ny dingana nataontsika ary nanatsara ny zava-nisy. Tena tsara tokoa ny mampifandray ny fitomboana misongadina miaraka amin'ny departemantan'ny varotra miverina amin'ny dian-jaza any Autopilot. Kevin Sides, CMO an'ny mpitondra sambo
Anisan'izany ny fahaiza-manao lehibe
Tanjona manara-maso: Ny Insights dia manampy amin'ny fampivondronana ireo ekipa manodidina ny tanjona lehibe amin'ny alàlan'ny famelana ny mpampiasa hanana fotoana hamoronana, hahatratra ary hizara ny tanjon'ny fiovam-pony amin'ny tsindry vitsivitsy.
Fepetran'ny fiovam-po: Aza adino velively ny tanjona farany - ny fiovam-po. Araho ny firoboroboan'ny fiovam-po ary zahao hoe iza, ary haingana dia haingana, misy olona mivadika amin'ny fantsona rehetra avy amin'ny mailaka mankany amin'ny carte postcard
Fampisehoana mailaka manangona: Jereo hoe manao ahoana ny toetran'ny mailaka ataonao ary mizatra amin'ny haavon'ny fivezivezena. Fantaro ny fotoana sy ny andro manan-danja amin'ny herinandro handefasana mailaka amin'ny fijerena valiny amin'ny fiakarana isan-karazany, ary hahazo ny halalin'ireo fampisehoana ambaratonga isan'ora aza.
Fantaro ireo hafatra mandresy: Arotsaho tsirairay ny valin'ny hafatra multichannel isan'andro. Ampitahao mora foana ny fitsapana A / B ary fantaro izay mandresy.
Momba an'i Autopilot
Autopilot dia rindrambaiko marketing amin'ny maso ho an'ny mandeha ho azy ny dian'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fampidirana teratany amin'ny Salesforce, Twilio, Segment, Slack, ary Zapier ary ny fahaizana mifandray amin'ireo fitaovana 800 namboarina ho tanjona, manome hery ny mpivarotra izahay hikolokolo ny fifandraisana ary hampitombo ny mpanjifa be karama amin'ny alàlan'ny mailaka, tranonkala, SMS, ary fantsona mailaka mivantana .
Tags: AnalyticsTsy MifantokaMpanjanantanyfanaraha-maso ny dia nataon'ny mpanjifaemail trackingfijerysalesforceampahanyhiahotrahoranareoTwiliozapier
Ohatrinona ny atiny vokarina an-tserasera ao anatin'ny 60 segondra?
Manara-maso antso an-tariby avy amin'ny fikarohana Organic sy Paid